အားလုံး Maltese - ဘာကြောင့်သူတို့ဟာအကောင်းဆုံးခွေးတွေလဲ။ - Breeds
အားလုံး Maltese - ဘာကြောင့်သူတို့ဟာအကောင်းဆုံးခွေးတွေလဲ။
ရိုးရှင်းစွာ Maltese ကိုခေါ် Bichon Malti သို့မဟုတ် Maltese ထရီ ကြောင်းတစ်ခုမယုံနိုင်စရာချစ်စရာကစားစရာခွေးဖြစ်ပါတယ် ၎င်း၏ပြပွဲ - ရပ်တ, စွဲမက်ဘွယ်သောအကျော်ကြားကျော်ကြားသော အဖြူရောင်ကုတ်အင်္ကျီ ။
ဤသည်သန့်စင်ဇိမ်ခံ၏ရင်ခွင်ပေါ်မှာထိုင်လျက်နှင့်သမ္မာကျမ်းစာကိုအလုပ်မှာခဲ့ကတည်းကကိုးကွယ်နေကြသည်, သို့သော်ကြည့်ဒီခွေးတစ်ကောင်ရဲ့စွမ်းအင်အဆင့်ကို, playfulness နှင့်စောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ချက်များပေးထားလှည့်စားနိုင်ပါတယ်။
သင် Maltese ကိုပိုင်ဆိုင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား။ ထွက်ရှာတွေ့ scrolling ။
ဒေါသ - Maltese ခွေးမိသားစုကောင်းလား
သင်၏ Maltese ကိုကြည့်ခြင်း
Maltese ခွေးပေါက်စများ - သွေးပြည့်သော Maltese သည်မည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။
ဘယ်သူက Maltese ကိုရသင့်သလဲ
နောက်ထပ်စာဖတ်ခြင်း: Maltese မှအလားတူမျိုးဆက်
အီဂျစ်ပြည်၏ Fayum တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကိုအီဂျစ်လူမျိုးများကဤဖောက်လုပ်မှုကိုကာလရှည်ကြာစွာဂုဏ်ပြုခဲ့ပုံရသည့်မော်လတာလ်စံပြစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ဒီ fido အီတလီနိုင်ငံမှအစပြုခဲ့သည် မော်လတာကျွန်း စစ္စလီကျွန်းတောင်ဘက်၊
အဲဒီအချိန်တုန်းကသူတို့ကိုသူတို့ကိုခေါ်ခဲ့သည် မော်လ်တာ၏ရှေးဟောင်း Dogge ။
ဘီစီ ၄ နှင့် ၅ ရာစုအကြားတွင်ဂရိများသည်သူတို့၏ပထ ၀ ီအနေအထားအရလှပမှုအတွက်မျိုးပွားခြင်းကိုနှစ်သက်ကြပြီး၎င်းတို့သည်ရွှေခေတ်ကြွေထည်မြေထည်ပေါ်တွင်သရုပ်ဖော်ထားပြီး“ Melitae Dog” ဟုရည်ညွှန်းသည်။
ရောမအင်ပါယာ၏မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်များသည်ဖက်ရှင်ကြေညာချက်နှင့်အဆင့်အတန်းသင်္ကေတအဖြစ် Maltese ၏အခန်းကဏ္evenကိုပင်အားဖြည့်ပေးခဲ့သည်။
ဤခွေးသည်သူမ၏ရင်ခွင်သို့မဟုတ်လက်ထဲမှထွက်လာမှသာရောမမက်ထရွန်ကိုအပြည့်အ ၀ ၀ တ်ဆင်ထားသည်ဟုမှတ်ယူနိုင်သည်။
Publius အလွန်နှစ်သက်မြတ်နိုးသော - Maltese ထဲတွင်အထူးသိပ္ပံပညာရှင်တစ် ဦး ရှိသည်။ သူ၏အကြိုက်ဆုံး pup နှင့်အတူဤဆက်သွယ်မှု Marcus Valerius Martialis '' epigrams အချို့အတွက်ကျော်ကြားနှင့်ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။
ပျော်ရွှင်စရာအချက် ဖြေ - မော်လ်တာခွေးတွေဟာရောဂါပျောက်ကင်းစေတဲ့ရောဂါတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကို“ နှစ်သိမ့်ပေးသူ” လို့လည်းလူသိများကြတယ်။
ရောမမြို့ကျဆုံးသောအခါ တရုတ်မျိုးဆက်များဥရောပအမှောင်ခေတ်ကာလအတွင်းမျိုးသုဉ်းသွားရာမှမျိုးကိုကယ်တင်ခဲ့သည် ။ မော်လ်ဒိုက်လူမျိုးများသည်သူတို့၏ဇာတိကစားစရာအခင်းများနှင့်ဖြတ်ကျော်ပြီးပိုမိုသန့်စင်သောဥရောပသို့ပြန်ပို့ခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည်။
သူတို့ဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက် I နှင့်စကော့၏ Mary ဘုရင်မကပိုင်ဆိုင်သောအခါ Malteses ပြန်မူပိုင်ရဲ့လက်နက်သို့ရောက်ကြ၏။
သူတို့နောက်ဆုံးတော့အမေရိကန်ကိုရောက်တော့၊ သူတို့က၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိကြ၏ အနောက်minster ခွေးဂေဟာကလပ်ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံး ခွေးပြပွဲ ၁၈၇၇ တွင်နယူးယောက်၌ဤနေရာကိုပြသခဲ့သည် Maltese ခြင်္သေ့ခွေး ။
ယနေ့ခေတ်တွင်မော်လတာခွေးမျိုးသည် Eva Longoria၊ Heather Locklear နှင့် Halle Berry စသည့်နာမည်ကြီးများအကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။
Maltese တွင် Poodle, spaniel နှင့် spitz blood (အချို့သောသူတို့ကိုနူးညံ့သော Spaniel ဟုအဘယ့်ကြောင့်ခေါ်ဆိုရခြင်းဖြစ်နိုင်သည်) ဆိုသောစကားများရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သေချာစွာပြောရလျှင်ဒီမျိုးနွယ်သည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ Barbichon မိသားစု ။
၎င်းတို့ကို American Kennel Club (AKC) မှသန့်ရှင်းသောခွေးများအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး၎င်းတို့ကိုမှတ်ပုံတင်ထားသည် ကစားစရာအုပ်စု ။
ယူနိုက်တက်ခွေးဂေဟာကလပ် (UKC) သည်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ခွေးအုပ်စုလက်အောက်ရှိဤအချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုသော်လည်းအခြားအဖွဲ့အစည်းများကမူဖောက်ခွဲမှုကိုအသိအမှတ်ပြုကြသည်။ သူတို့ပါဝင်သည်:
အမေရိကန်ခွေးတစ်ကောင်အသင်း, Inc (ACA)
အမေရိက၏ခွေး Registry (DRA)
Continental ကဥယျာဉ်ကလပ် (CKC)
မြောက်အမေရိကပေါက်ပေါက် Registry, Inc (NAPR)
ယူနိုက်တက်စတိတ်အပြင်ဘက်တွင်ကနေဒါ Kennel ကလပ် (CKC)၊ သြစတြေးလျအမျိုးသားခွေးဂေဟာကလပ် (ANKC)၊ Fédération Cynologique Internationale (FCI)၊ နယူးဇီလန် Kennel Club (NZKC) နှင့်ဂရိတ်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ Kennel Club (KCGB) တို့ရှိသည်။
အောက်မှာ ကြာရှည်တောက်ပပြီးအလွှာတစ်ခုစီ အဖြူရောင်ကုတ်အင်္ကျီ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောစတုရန်းကိုယ်ထည်ဖြစ်ပြီး Maltese ကိုအားစိုက်ထုတ်သွားသည်။ သူတို့ဟာအခြေခံအားဖြင့်ဟန်ချက်ညီပြီးအခမဲ့စီးဆင်းနေသောကြော့ရှင်းမှုပုံရိပ်ပါပဲ။
သူတို့မှာအနည်းငယ် rounded ဦး ခေါင်းခွံရှိပြီးသူတို့ရဲ့ furry ဆွဲကြိုးနားတွေကခေါင်းနဲ့နီးကပ်လာတယ်။ တဖန်သင်တို့အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အညိုရောင်နှင့်ချစ်စရာ gumdrop နှာခေါင်းဖြစ်နိုင်သည်သောသူတို့ကိုကြီးတွေ, မှောင်မိုက်မျက်လုံးများမှမကြည့်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
မောလ်ခွေးများတွင်ခြေထောက်တိုသော်လည်းဖြစ်နိုင်သည် သူတို့လျောက်ပတ် trotting နေသည့်အခါတိုင်း floating ကြည့် ။ သင်သည်သူတို့၏အမြီး၏လှုပ်ရှားမှုကဆင်းမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ဆံပင်ဖြူနှင့်အများအားဖြင့်တွေ့ရသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းတို့သည်အဖြူနှင့်သံပုရာသို့မဟုတ်အဖြူနှင့် tan အမွေးများရှိသည့်အခါဆင်စွယ်၏အသွင်အပြင်ကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။
Maltese ပြပွဲခွေးများအတွက်အများအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အလယ်ပိုင်းလိုင်းဖြင့်သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုစီတွင်ဆံပင်ရှည်များချိတ်ထားသည်။ ၎င်းသည်အရှည် ၈ လက်မ (၂၂ စင်တီမီတာ) ရှိပြီး၊ ဖြောင့်ဖြောင့်ခြင်း၊
puppyhood မှလူကြီးသို့ကူးပြောင်းသည့်အခါ Maltese ခွေးပေါက်များသည်အရောင်ပြောင်းရန်ဘုံမဟုတ်ပါ။ သံပုရာနှင့်နီ၏အစက်အပြောက်သို့မဟုတ်အရိပ်ကြီးထွားလာနေစဉ်တိုးမြှင့်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်အရမ်းအစွန်းရောက်သို့မဟုတ်အဖြူနှင့်ဝေးအဘယ်အရာကိုမျှ။
သူတို့ရနိုင်တယ် အရေပြားခြယ်ပစ္စည်း သို့သော် ယခင်က tan သို့မဟုတ်သံပုရာဖြစ်ခဲ့သော၎င်းတို့၏အသားအရေ၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများသည်ကြီးမားသောပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများဖြစ်စေ၊
၎င်းသည်မည်သည့်အသက်အရွယ်မဆိုဖြစ်ပွားနိုင်သည်၊ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်ဤမျိုးနွယ်၏ဖောမိဘများသည်သူတို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဖြစ်သည့်အခါယင်းကိုသတိထားမိကြသည် 1 မှ2နှစ်ရှိန်းကျင် ။
သင်အရောင်များအကြောင်းပြောနေစဉ်၊ သင်သတိထားမိလျှင် Maltese ရဲ့အနက်ရောင်နှာခေါင်းပန်းရောင်လှည့်နေသည် ကျနော်တို့ကသဘာဝကမပြောလိမ့်မယ်။
အပူရှိန်ရှိ Malteses အမျိုးသမီးများသည်ပန်းရောင်နှာခေါင်းများကိုရရှိကြသည်၊ အချို့သည်နေရောင်ခြည်အလုံအလောက်မရရှိချိန်တွင်သို့မဟုတ်၎င်းတို့အသုံးပြုသောနို့တိုက်ကျွေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အလေးချိန်နှင့်အလေးချိန် - Maltese ခွေးတွေဘယ်လောက်ရကြလဲ။
ဒါကပတျသကျ။ အလှနျသေးငယ်သော pup သာ7ပေါင်အောက်မှာအလေးချိန် (၃ ကီလိုဂရမ်)! မင်းကသင်၏ Maltese ကိုကိုက်ညီတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပူးပေါင်းစေချင်တယ်ဆိုရင်၊4မှ6ပေါင် (2 မှ 2.7 ကီလိုဂရမ်) ပိုမိုနှစ်သက်သည် ၎င်း၏အပေါ်အခြေခံပြီး AKC စံဖောက် ။
သူတို့ပတ်ပတ်လည်ရပ်တယ်7မှ9လက်မ (၁၈ မှ ၂၃ စင်တီမီတာ) ရှည်သော်လည်းအချို့သည်အမြင့် ၁၂ လက်မအထိ (ပခုံး) တွင်ရောက်ရှိနိုင်သည်။
မော်လ်တာခွေးတစ်ကောင်သည် ၁၂ လမှ ၁၅ လကြားအရွယ်ရှိအရွယ်အစားအရွယ်အစားကိုတိုင်းတာသည်။
ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အရွယ်အစားသေးငယ်မှုကြောင့် Maltese ဆိုတာက အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့တိုက်ခန်းခွေး ။ တကယ်တော့သူတို့ဟာကွန်ဒိုတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ခြံတစ်လုံးပါတဲ့အိမ်တစ်လုံးပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်အမျိုးအစားအားလုံးအတွက်သင့်တော်ပါတယ်။
ပိုသေးတဲ့ဗားရှင်းလိုချင်ပါသလား သင်ရနိုင်သည် Maltese Teacup ၎င်းသည်အမြင့် ၄ လက်မမှ ၆ လက်မ (၁၀ မှ ၁၅ စင်တီမီတာ) နှင့်အလေးချိန် ၃ မှ ၅ ပေါင် (၁ မှ ၂ ကီလိုဂရမ်) သာရှိသည်။
Maltese ခွေးနှင့်ခွေးပေါက်စများ၏ဤဗီဒီယိုစုစည်းမှုကိုကြည့်ပါ။ ငါတို့လိုငါတို့ aww ပြောတာကိုမရပ်နိုင်ဘူးဆိုတာသေချာပါတယ်။
မော်လ်တာခွေးတွေဟာလူတွေကို ဦး စားပေးခွေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့သမိုင်းကနေရနိုင်တယ်။
သူတို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအဖော်များဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်အနေနှင့်၎င်းကိုအကြံပြုသည် ဆိတ်ငြိမ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုကလေးများရှိသည့်လူကြီးများသို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်သူများသာရှိသောအိမ်များအတွက် ။
သူတို့သည်ပျက်စီးလွယ်ရုံသာမကလူငယ်များကိုအလွယ်တကူလွဲမှားစွာကိုင်တွယ်နိုင်သည်သာမကကလေးငယ်များကိုလည်းသည်းမခံနိုင်ပါ။ သူတို့ဟာဟောင်လိမ့်မယ် snappish ပါလိမ့်မယ် အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့လူသားမြားသဖြင့် pampered ။
ဆိုလိုသည်မှာ Maltese ခွေးအမျိုးအစားသည်ရန်လိုခြင်းသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ သူတို့ဟာကြောက်စိတ်ကင်းမဲ့မှု၊ ကောင်းတယ် အစောင့်ခွေးများ ။ သူတို့ဟာတစ် ဦး ချစ်စရာကောင်းကစားစရာ - ခွေးလမ်းအတွက် Hardy ပါပဲ။
သူတို့ကနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့အခြမ်းရှိသည်နှင့်သူတို့မိတ်ဆွေတစ် ဦး အဖြစ်လူတိုင်းနှုတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်သော်လည်းအချို့ Malteses သူစိမ်းနှင့်အတူသိုထားနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့လို Maltese ကစားစရာခွေးမျိုးကွဲများမှာရှိတတ်ကြတာကိုအလေးအနက်ပြောချင်ပါတယ် သေးငယ်တဲ့ခွေး Syndrome သို့မဟုတ် နပိုလီယံ Complex ။
ထို့ကြောင့်သင်လမ်းလျှောက်ထွက်သည့်အခါတိုင်းသတိထားပါ၊ သင်၏ furry လေးကိုသူမနှင့်ကြီးမားသော doggos များမှကာကွယ်ပါ။
သူတို့ဟာအဖော်ခွေးတွေအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတာပါ၊ ဆိုလိုတာကသူတို့ဟာအာရုံစိုက်မှုအများကြီးရလေ့ရှိတယ်။ သူတို့သည်ပျင်းလာလျှင်သို့မဟုတ်ခွဲနေသည့်စိုးရိမ်မှုကိုခံစားနေရလျှင်၊
နောက်တစ်ခုမှာဝါးခြင်းကဲ့သို့သောအဖျက်အပြုအမူများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည် သင့်သားမွေးကလေးကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာမထားခဲ့ပါနှင့် ။
သင်၏ Maltese ကငိုနေသည်သို့မဟုတ်တီးတိုးပြောဆိုနေပါကအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲလုပ်ခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်၎င်းကိုလျစ်လျူမရှုပါနှင့်။ သူတို့ကိုကြောင်းဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အဘို့အဒါဟာနည်းလမ်းပါပဲ သူတို့ကောင်းကောင်းမခံစားရဘူး သို့မဟုတ်သူတို့နှင့်အတူတစ်ခုခုမှားရှိပါတယ်။
သင်ကထွက်တွက်ဆလို့မရဘူးဆိုပါကအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာနေပါ။ VET သို့လာရောက်ရန်အချိန်တန်ပြီဖြစ်သောကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါနှင့်။
အခြားထူးကဲသောအရာများသည်လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပြီးကံကောင်းခြင်းမှာ Maltese ခွေးများလည်းရှိသည် အသိဉာဏ်နှင့်နာခံမှု ဒါကြောင့်သူတို့ကလျင်မြန်စွာသင်ယူပါလိမ့်မယ်။
သို့သော်သတိထားပါ။ ချစ်စရာကောင်းသောမျက်နှာနှင့်ချိုသောမျက်လုံးများကသင့်မွေးမွေးကလေးကိုဖျက်ဆီးရန်သွေးဆောင်လိမ့်မည်။ ရုံကတိုက်ခြင်းနှင့်မြဲမြံစွာဖြစ်, ဒါမှမဟုတ်သင်တစ် ဦး ရှိပါလိမ့်မယ် တကာနှင့်ခေါင်းမာ အိမ်ရှင်မ။
ဒါဟာသူတို့ဆုလာဘ် -based လေ့ကျင့်ရေးကိုကောင်းစွာတုံ့ပြန်သောကောင်းတစ် ဦး အရာင်, ဒါကြောင့်အချို့နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆင်သင့် အရသာရှိတဲ့ရယူထားသော သူမအတွက်။
မင်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ပြီးတော်မူသောအားဖြင့်ကိုးကွယ်သောခွေးတစ်ကောင်ကိုသင်လိုချင်လျှင်သူမကိုသူမကဲ့သို့ဆက်ဆံရန်လိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်တစ် ဦး တက်သည်ဖြစ်ရမည်ဆိုလိုသည် မြင့်မားသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ။
အပြင်မှာနှင်းကျနေတယ်ဒါမှမဟုတ်မိုးရွာနေရင်တခြား paw မိဘတွေဟာသူတို့ရဲ့နှင်းဖြူကောင်လေးတွေနဲ့ဘာလုပ်မှာလဲ။ စက္ကူရထား !
သင်သူတို့လည်းဖြစ်ကြောင်းသိသင့်ပါတယ် အအေးမိ အထူးသဖြင့်သူတို့စိုစွတ်နေလျှင်သို့မဟုတ်၎င်းသည်စိုစွတ်သောသူတို့၏ယောင်များနှင့်ဆံပင်ညှပ်များပင်လျှင်ပင်။
သင်၌ရှည်လျားသောဆံပင်ရှိသည့် Maltese ရှိပါကထိုအစိတ်အပိုင်းကိုသူမနောက်ကျောတွင်အရေပြားနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကိုသင်တွေ့ပါသလော။ သူမသည်ထိုတွင်နေလောင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ပူလွန်းလျှင်သူမကိုမထုတ်ပါနှင့်။ လိုအပ်ရင်ခွေးတိတိကျကျသုံးပါ နေရောင်ခြည် ။
သင်၏ Maltese ဘာသာစကားကိုလေ့ကျင့်ပါ
သင်ဤခွေး၏စွမ်းအင်အဆင့်ကိုမယုံဘူး! သူတို့ရဲ့အရွယ်အစားနေသော်လည်းမောလ်ဖြစ်ကြသည် အလွန်အမင်းတက်ကြွစွာ နှင့်ဂိမ်းနည်းနည်းအားကစားသမားဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်ပျြောရှငျမကြာခဏအိုမင်းသို့ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့ရိုင်းခြမ်းရုံကစားရန်နှင့် run ဖို့ကိုချစ်၏။
သူတို့ဟာယေဘုယျအားဖြင့်ဒဏ်ငွေလုပ်ပါလိမ့်မယ် နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်း၏ 20 မှ 30 မိနစ် , သူတို့သည်ပြီးသားအိမ်တွင်းတော်တော်တက်ကြွစွာပါပဲ။ သင်၏ Maltese ကိုကောင်းသောပုံသဏ္keepာန်ရှိစေရန်အခြားနည်းလမ်းများရှိသေးသည်။
အဲဒီမှာပုံမှန်နေ့စဉ်လမ်းလျှောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်ကွက်အတွင်းမှတစ်ဆင့်လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ခွေးပန်းခြံရှိတယ်၊ ခမ်းနားထည်ဝါလှတဲ့သန်စွမ်းတဲ့သားပေါက်တွေအတွက်ခွေးတစ်ကောင်အားကစားဟာသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်။
သင့်မှာရှစ်လမပြည့်သေးတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ရှိရင်သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရှိန်အဟုန်နဲ့ကစားစေပါ ယခုများအတွက်အိမ်နောက်ဖေး၌တည်၏။ သငျသညျဖွံ့ဖြိုးဆဲကနေအလေးအနက်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားနိုင်အောင်သူမ၏အရိုးဖွံ့ဖြိုးပြီးရင့်ကျက်ပါစေ။
ဖြီးလိမ်းပုံ: Maltese ခွေးများသွန်းလောင်းပါသလား
Bichon Frises နှင့် Poodles ကဲ့သို့ပင် Maltese ခွေးများသည် hypoallergenic ဖြစ်သည်။
သူတို့တစ်တွေရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကတည်းက undercoat မရှိသွန်းလောင်းရန်နည်းနည်းရှိပါတယ် , သူတို့ကိုဓာတ်မတည်နှင့်အတူလူတို့အဘို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုအောင်။
နူးညံ့သိမ်မွေ့ နေ့စဉ်ဖြီး နှင့် ဖြီး လိုအပ်သည် ဖျာများနှင့်ရှုပ်ထွေးသောပင်လယ်အော်မှာစောင့်ရှောက်ရန်။ ဤသည်သည် Malteses တိုတိုချုံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ခွေးပေါက်ကောင်တစ်ကောင်အားကစားအတွက်လည်းအကျုံးဝင်သည်။
သင့်ကလေး၏ဆံပင်ဖြူသည်စိုပြေနေလျှင်၊ အေးစက်မှုန်ရေမွှား သို့မဟုတ် detangler မှုန်ရေမွှား သူမ၏အင်္ကျီကိုပေါ်သို့။ ထို့နောက်, ကိုသုံးပါ ဖြီး တစ် ဦး ချင်းစီသားမွေးဖြေလျှော့ရန်နှင့် ဖြီး ။
ရှုပ်ထွေးသောအရာများကိုချက်ချင်းဆွဲထုတ်ရန်နှင့်သူမမဆေးကြောမီသို့မဟုတ်သူတို့ပိုမိုတင်းကျပ်လာမည်ကိုသေချာအောင်မကြိုးစားပါနှင့်။ သင်တစ် ဦး လည်းကြိုးစားနိုင်ပါသည် ဖြီး - အမဲလိုက်ဖြီး ။
ရေချိုးခြင်း၊ ပုံမှန်အဝတ်လျှော်ခြင်း၊ အေးအေးဆေးဆေး နှစ်ပတ်မှသုံးပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီးထိုအဖြူရောင်အင်္ကျီသည်၎င်း၏အကောင်းဆုံးကိုကြည့်နေသည်။ တချို့ paw မိဘများ ခေါင်းလျှော်ရည် သူတို့ရဲ့ Maltese အပတ်စဉ်လည်း။
နားများကိုအပတ်စဉ်စစ်ဆေးသင့်သည်၊ အပျက်အစီးများသို့မဟုတ်ဖယောင်းအဆောက်အအုံများရှိမရှိစစ်ဆေးရန်သာမကဆံပင်များများကိုဖယ်ရှားရန်လည်းလိုအပ်သည်။ ထဖို့လိုတယ်
ဒီဗီဒီယိုမှာ Maltese အမျိုးသားအမျိုးသားများအတွက်အခြေခံဖြီးလိမ်းပုံနှင့်သူတို့၏ဆံပင်ကိုမည်သို့ဆွဲထုတ်ရမည်ကိုပြလိမ့်မည်။
သင်ဂရုစိုက်ရမည့်နောက်ထပ်အင်္ကျီနှင့်ဆက်နွှယ်သောလုပ်ဆောင်မှုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်သည် မျက်ရည် - စွန်းထင်း ။ ၎င်းသည်ခွေးကောင်များ၌အလွန်ရှည်လျားပြီးအဖြူရောင်ဆံပင်ရှိသောသူတို့၏မျက်နှာပေါ်တွင်မြင်နိုင်သည်။
သင်သည်သင်၏ထံမှမျက်ရည်အစွန်းအထင်းမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ် ရင်ခွင်ခွေး လေးမှငါးလအရွယ်မှစ , သူတို့ကသူတို့အရွယ်ရောက်ပြီးသူသွားများရတဲ့ပါတယ်အတူတူပင်အသက်အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်ရည်နှင့်မျက်နှာ - အစွန်းအထင်းကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် -
သင်၏ Maltese ကိုပုလင်းထဲမှသန့်စင်သောရေကိုသောက်ရန်သင်ကြားပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဓာတ်သတ္တုပါ ၀ င်သူများသည်စွန်းထင်းမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
သင့်ခွေးကိုပလပ်စတစ်ဖလားများဖြင့်မကျွေးပါနှင့်။ ရွေးချယ်ပါ ဖန်ခွက် , ကြွေထည် သို့မဟုတ် အစွန်းခံသံမဏိ , ထို့နောက်အကြားကဆေးကြောပါ။
အကယ်၍ အထက်ပါအဆင့်များမှမျက်နှာအစွန်းအထင်းများကိုမရှင်းလင်းနိုင်ပါကဓာတ်မတည့်ခြင်း၊ ပိတ်ဆို့နေသောမျက်ရည်ပြွန်များသို့မဟုတ်အခြားကျန်းမာရေးအခြေအနေများကြောင့်ဖြစ်သည့်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀ ီရိယနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
မော်လ်တာမိဘများကသူတို့၏သားရေ၏ဆံပင်ကိုသူတို့၏မျက်လုံးများနှင့်ဝေးကွာစေရန်အတွက် topknot သို့ချည်ထားကြသည်။ အသုံးပြုတာအကောင်းဆုံးပါပဲ coated တီးဝိုင်း ဒါကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုပြုလိမ့်မည်မဟုတ်နိုင်အောင်သူမ၏ ဦး ခေါင်းသားမွေးတက်ထားရန်။
ကျန်တဲ့ဆံပင်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ပိုလွယ်ကူအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ တစ် ဦး က Maltese သူတို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးဆံပင်ညှပ်ရနိုင်သည် အဖြစ်ခြောက်လအဖြစ်အစောပိုင်း ။
ထိုနောက်မှသူတို့သည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ချည်ထည်များလိုအပ်သည်။ သင်ဤအရာကိုအိမ်တွင်လုပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်သော groomer တစ်ယောက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင်ဝယ်ယူနိုင်သောခွေးထုတ်ကုန်များစွာရှိပါသည် မျက်ရည်အစွန်းအထင်း removers သို့သော်၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုသည့်အခါသို့မဟုတ်မည်သည့်အိမ်တွင်းကုစားမှုမဆိုကြိုးစားသောအခါသတိထားပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြီးလိမ်းပုံနှင့် ပတ်သက်၍ သင်နေစဉ်၊ Maltese ခွေးများသည်အသက်ကြီးလာသောအခါသွားရောဂါများကျရောက်တတ်သည်ကိုသင်သိသင့်သည်။ တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်မှသုံးကြိမ်တိုင်သင်သွားနိုင်သော်လည်းနေ့စဉ်သန့်စင်ဆေးကြောခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သွားဖုံးပြproblemsနာနှင့်အသက်ရှူကျပ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ သင့်ကလေး၏သွားများကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစစ်ဆေးပြီးသန့်ရှင်းသင့်သည်။ ထို့အပြင် ကစားစရာဝါး နှင့် ရယူထားသော သွားဖုံးနှင့်သွားများကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။
သင်၏ Maltese ကိုအစာကျွေးခြင်း
မော်လ်ဒိုက်ပိုင်ရှင်များကဤဖောက်ခွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တန်ဖိုးထားရမည့်အရာတစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်အစားအစာများစွာမလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ dry မှ high အရည်အသွေးမြင့်ခြောက်သွေ့သောခွက်ဖလား ခွေးစာ နေ့ရက်တိုင်းအတွက်လုံလောက်ပါတယ်
အသက်၊ လှုပ်ရှားမှုအဆင့်နှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ် အခြေခံ၍ သင့် pooch ကိုသင်မည်မျှကျွေးသည်။ သူတို့ကသကြားနှင့်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အဆီမြင့်မားသောကြောင့်, ဆက်ဆံမှုကိုလည်းကန့်သတ်ထားသင့်ပါတယ်။
ဒီမှာလှည့်ကွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒီ furball ဖြစ်ပါတယ် ရန် ဇီဇာကြွယ်သောအစားအစာ ။ အိတ်တစ်လုံးမ ၀ ယ်ခင်သင့်ခွေးကြိုက်သည့်အရာကိုရှာဖွေရန်မတူညီသောမျောက်လွှဲများကိုစမ်းသပ်နိုင်သည်။
Malteses ထို့အပြင်အထိခိုက်မခံအစာအိမ်ရှိသည် ဒါကြောင့်သူမအတွက်အစားအစာတစ်ခုရွေးတဲ့အခါစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
နှင့်သော်လည်း Maltese တစ်ရှိနိုင်ပါသည် ပျမ်းမျှအား သက်တမ်း 12 မှ 15 နှစ်၏ သူတို့သည်သူတို့ကျရောက်တတ်သည့်ဘုံကျန်းမာရေးအခြေအနေများကိုသတိပြုရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
kneecap အရပျထဲကချော်ဘယ်မှာ patellar ဇိမ်ခံသို့မဟုတ်ဇိမ်ခံ patella ရှိပါတယ်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ပြန်လျှောရှိသည့်နေရာတွင်သူ့ဟာသူမပြင်နိုင်ပါကခွဲစိတ်ကုသမှုသည်နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Glaucoma, entropion နှင့် Progressive Retinal Atrophy (PRA) တို့သည်ဤရောဂါရှိနိုင်သောမျက်စိပြproblemsနာအချို့ဖြစ်သည်။
တူသောနှလုံးကွဲလွဲချက်များ မူပိုင်ခွင့် Ductus Arteriosus (PDA) နှင့်မွေးရာပါအသည်းပြissuesနာများတွင် portacaval shunt၊ portosystemic အသည်း shunt နှင့် Microvascular Dysplasia (MVD) တို့ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်ကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဓိကစိုးရိမ်မှုများဖြစ်သည်။
တဖန်သင်တို့အကြောင်းကြားကြပြီ White ကခွေး Shaker Syndrome ? နာမတော်၏အဓိပ္ပာယ်အရ၎င်းသည်အများအားဖြင့်အဖြူရောင်ဝတ်ရည်များကိုအကျိုးသက်ရောက်ပြီးအလွန်အမင်းစိတ်လှုပ်ရှားမိသောအခါညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်တုန်ခါခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ထိုအခါ hydrocephalus, hypothyroidism, distichiasis နှင့်နားပင်းရှိပါတယ်။
အသေးစားကျန်းမာရေးပြproblemsနာများအတွက် Malteses သည်atrachea ပြိုကျ နှာချေခြင်းနှင့်အရေပြားပြissuesနာများဖြစ်ခြင်း။
မင်းရဲ့ Maltese သားမွေးကလေးကသူမဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီရောဂါတွေအားလုံးရလိမ့်မယ်လို့ငါတို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါတွေကိုသတိထားတာကအကောင်းဆုံး။
အားလုံးအဆင်ပြေလျှင်၊ သင်သည်သက်တမ်းနှစ် ၂၀ ရှိပြီဖြစ်သော Malteses ရှိကြောင်းသိရ။ သင် ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခွေးပေါက်စတစ်ကောင်အားဤကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများကိုခံယူခဲ့သောဂုဏ်သိက္ခာရှိသောမျိုးပွားသူတစ် ဦး ထံမှမော်လ်ဒန်းခွေးတစ်ကောင်ရရှိခြင်း၏အရေးကြီးမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ ပိုမို၍ အလေးအနက်မပြောနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
Patella အကဲဖြတ်ခြင်းအပါအဝင်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အရိုးဆိုင်ရာဖောင်ဒေးရှင်း (OFA) စမ်းသပ်မှုများ၊ တင်ပါးဆုံရိုး dysplasia , တံတောင်ဆစ် dysplasia, hypothyroidism နှင့် Von Willebrand ရဲ့ရောဂါ။
မွေးရာပါနှလုံးရောဂါမူပိုင်ခွင့် ductus arteriosus (PDA) ကိုစစ်ဆေးရန်နှလုံးရောဂါစစ်ဆေးခြင်း
အသည်းဆိုင်ရာပြruleနာများကိုအုပ်ချုပ်ရန် Bile Acid Test ကိုပြုလုပ်ပါ
thrombopathia များအတွက် Auburn တက္ကသိုလ်ရဲ့စမ်းသပ်မှု
Canine Eye Registry Foundation (CERF) မှမျက်လုံးအကဲဖြတ်ခြင်း
AKC တစ်ခုရှိပါတယ် တရားဝင်ဖောက်ကလပ်ကျန်းမာရေးကြေညာချက် ပိုမိုသိရှိလိုပါကဖတ်ရန်
ဒါဟာ Maltese ခွေးတွေရာစုနှစ်များစွာမြင့်မားစွာတန်ဖိုးထားခဲ့ကြသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ၁၅၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်းကခွေးပေါက်စတစ်ကောင်ကိုဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်၊ ထိုအချိန်သည်အလွန်စျေးကြီးခဲ့သည်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာမော်လ်တာလူမျိုးလေးကောင်ကနေငါးကောင်အထိအမှိုက်သရိုက်များရှိနိုင်တယ်၊ $ 600 မှ $ 4000 ၏စျေးနှုန်းအကွာအဝေး ။
သို့သော်ချန်ပီယံလိုင်းမှလာသည့်မော်လတာခွေးများသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ အထိရနိုင်သည်။
ကန ဦး ကုန်ကျစရိတ်ထက်အခြား သငျသညျကိုလည်းတစ်နှစ်လျှင်န်းကျင် $ 1500 ဘတ်ဂျက်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှု၊ အစားအစာ၊ ဆေးကုသစရိတ်နှင့်ဖြီးလိမ်းပုံတို့အတွက်ဖြစ်သည်။
သင်ရွေးချယ်မည့် Maltese ခွေးပေါက်စကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာတွေးမိလာသည်။ သို့သော်အသက်ပြင်းပြင်းရှူ။ ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းများကိုရှင်းလင်းကြပါစို့။
သင်သည်တာ ၀ န်ရှိသည့်မွေးမြူသူတစ် ဦး ထံမှကလေးတစ်ကောင် ၀ ယ်နေကြောင်းသေချာစေရန်သင်၏သုတေသနကိုပြုလုပ်ရမည်။ ထိုအခါသင်နှင့်ရောင်းသူအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရှိသင့်သဖြင့်မေးခွန်းများနှင့်စိုးရိမ်မှုများအားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။
အားလုံးစာရွက်စာတမ်းများ, လက်မှတ်များနှင့်ကျန်းမာရေးအာမခံချက်အရပျ၌ရှိပါက, ထို့နောက်သူပဲ! ယူနိုက်တက်စတိတ်အတွင်းရှိရောင်းရန် Maltese ခွေးပေါက်စများကိုကြည့်ရှုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား။
အကောင်းဆုံးနေရာမှာ American Maltese Association နှင့်ဖြစ်သည် မျိုးဆက်လမ်းညွှန် ။
သင်၏နောက်လောင်းကြေးမှာဖြစ်လိမ့်မည် AKC စျေးကွက် ။
မင်းသမီးခွေးပေါက်စ (The Angels)
မွေးစားဘို့ Maltese ခွေး
ဒီဖောက်သည်လူကြိုက်များသော်လည်းအချို့သောအရွယ်ရောက်သူ Malteses များသည်အမိုးအကာများသို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်ကယ်ဆယ်ခြင်းခံကြရသည်။
Maltese ကယ်ဆယ်ရေး (ကယ်လီဖိုးနီးယား)
Northcentral Maltese Rescue, Inc. (ဝါရှင်တန်)
Southern Comfort Maltese ကယ်ဆယ်ရေး (Tennessee)
Maltese crossbreeds အကြောင်းပြောရရင်သူတို့ဟာ purebred လိုကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်။ သင်ဤခွေးများကိုတွန်းလှန်။ မရနိုင်ပါ။
Maltipoo (Maltese & Poodle ရောနှောခြင်း)
မလရှီ (Maltese & Shih Tzu အရောအနှော)
Morkie (Maltese & Yorkie ရောနှောမှု)
Malchi (Maltese & Chihuahua ရောနှောခြင်း)
Maltipom (Maltese & Pomeranian ရောနှောခြင်း)
Maltese ဖောက်တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် နူးညံ့သိမ်မွေ့သေးသတ္တိ ကစားစရာခွေး မြင့်မားတဲ့ လေ့ကျင့်နိုင်စွမ်း ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောအဖော်၊ တိုက်ခန်းအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်ကုထုံးခွေးတစ်ကောင်အဖြစ်ပြုလုပ်ခြင်း။
သူတို့၏အင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်ခြင်းသည်အချိန်ကုန်စေသည် , ဒါကြောင့်သင်ကနိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု pooch ရှာနေလျှင်, Maltese သင်အဘို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာသူတို့ရဲ့ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးကစားနေဆဲဖြစ်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာအစုအဝေးတစ်ခုကိုလိုချင်လျှင်သင်ကိုယ်တိုင် Maltese ကိုရယူလိုက်ပါ။
သင်က Maltese နဲ့အတွေ့အကြုံရှိပါသလား မှတ်ချက်ပေးပါ။
ခွေးပေါက်စလေ့ကျင့်ရေးအချက်အလက်များ - ခွေးကျွမ်းကျင်သူ ၄၅ ယောက်ဟာသူတို့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဝေမျှကြသည်
standard wirehaired dachshund ခွေးပေါက်လေးများရောင်းရန်ရှိသည်
pitbull နှင့် mastiff ရောစပ်ပုံများ
labrador အပြာရောင် heeler ရောစပ်ခွေးပေါက်စ